Agaasimaha Waaxda Dakhliga iyo Canshuuraha | Somali Employment Agency
Jagada: Agaasimaha Waaxda Dakhliga iyo Canshuuraha
Khibradda: 7 + Sano shaqo la xiriirta xisaabaadka iyo maaliyadda
Sargaalkaan wuxuu noqonayaa agaasimaha waaxda dakhliga iyo canshuuraha ee dowladda hoose ee Garowe.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay ururinta cashuuraha Dawladda Hoose ee Degmada.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay abuuris ilo dhaqaale oo cusub iyo u sahamintooda.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay dabagalka iyo soo xaraynta cashuurihii baaqday sannooyinkii hore.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay kormeerka suuqyada iyo hawl qabadka shaqaalaha ururiya cashuuraadka.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay qiimaynta shaqaalaha cashuuraha iyo ku tababaridooda goobta shaqada (on job training).
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay tira-koobidda iyo diiwaangelinta hantida ma guurtada ah ee dadewynaha Degmada ku nooli leeyihiin, sida Daaraha, Huteelada, goobaha ganacsiga, carshaanta, sandaqadaha, beeraha, bajaajta, gaadiidka I.W.M. ee Cashuuruhu ku waajibtay.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay ka talo bixinta arrimaha shaqada iyo shaqaalaha waaxda.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay qiimaynta noocyada cashuuraha ee sannad kasta.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay ururinta kirada iyo arrimaha ijaarka hantida Dawladda Hoose.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay tirakoobka iyo diiwaangelinta ilaha dakhliga.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay soo xeraynta dakhli maalmeedka
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay talo soo jeedinta abuuridda iyo dib u habaynta Cashuuraha.
Agaasimuhu wuxuu masuul ka yahay kala xadaynta iyo kala habeynta darajooyinka liisamada.
Shahaadada kawaad ee jaamacadda ee culuumta Xisaabaadka, dhaqaalaha, maareynta ganacsiga I.W.M
Ugu yaraan 7 sano iyo kabadan oo la xariirta xisaabaadka iyo maaliyadda (Xafiis dowli ah waa faa’iido dheeri ah)